Dhumatii Oromoo Moyaaleetti Tahe -
Damee Boruutin, Bitootessa 13, 2018
Humnaan cabsitee nu bulshuu ykn nu balleessitee baduuf akka akeeka qabdu ifatti argaa jirra. Badii jalaa of olshuuf murtii fi tarkanfiin fudhatamu harka Uummata Oromoo jira. Yaada kana abba qabsichaa kan tahe Qeerroo Bilisummaa Oromoof dhiisuun fedha. Hoogganni Qeerroo Bilisummaa Oromoo haalla qabatamaa jiru hundaa xinxalee akaataa itti humna Uummata Oromoo yaroo gabaaba keessatti karaa qindoomina qabuun diina irratti bobbaasee Fincila Xumura Garbummaa akka galmaan gahuu godhu kadhannaa koo ti.
← Killing of civilians by Ethiopia troops no accident, say residents WBO Zoonii Kibbaa tarkaanfii humna gabroomfattuu waraana wayyaanee irratti fudhate →